Somaliland: Bariiska Caagga Ah Oo La Sheegay Inuu Hargeysa Soo Gaadhay Iyo Halista Caafimaad Ee Uu Leeyahay - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Bariiska Caagga Ah Oo La Sheegay Inuu Hargeysa Soo Gaadhay Iyo...
Bariiska caagga ah ee mudooyinkii u danbeeyey dhex wareegayey dalalka dunida ka tirsan gaar ahaana Afrika ayaa hadda la sheegayaa inu soo gaadhay caasimadda Somaliland ee Hargeysa.
Qof Hargeysa dagan oo sheegay inuu si kadis ah u arkay Bariiskan oo lasoo kariyey ayaa Geeska Afrika u sheegay in markii uu arkay ka shakiyey uuna ku sameeyey tijaabo gacmeed,wuxuu sheegay in markii loo keenay Bariiska oo bisil ee uu ka shakiyey uu cantoobo Bariiska kamid ah 11 Jeer ku sameeyey cajiin,kadibna bariisku uu isku rogay sida Kubadda oo kale.
Tijaabadan cajiinka ayaa ah tijaabo lagu kala saaro Bariiska rasmiga ah iyo Bariiska caagga ah .
Bariiska Caagga ah ayaa marka 11 jeer gacanta iyo waxii ka badan lagu cajiimo wuxuu noqonayaa sida kubadda oo kale,marka Miis ama Kursi lagu tuurana Makala daadanayo .halka Bariiska caadiga ah marka laa cajiimo ee dhulka ama miis lagu tuuro uu si caadi ah u kala furfurmayo.
Qofkan oo ka cudur daartay in aan magaciisa sheegno ayaa markii uu tijaabada sameeyey wuxuu iska duubay muuqaal,waxaana la arkayaa Bariiska oo sida kubada u boodboodaya markii uu cajiimay.
Bariiskan ayaa inta aan la arkin ay adag tahay in la kala garto inuu yahay Bariiskii runta ahaa iyo Bariiska caagga ah ilaa shaybaadh loo diro.
Laakiin Somaliland ayaa ay fududahay in Bariiskan caagga ah iyo waxyaabo kale oo quutal daruuriga ahiba ay si fudud usoo galaan,maadaama oo uu Qaranku lahayn qalab lagu hubin karo tayada Quutal daruuriga dalka soo galaya,waxaana hore u jirey walaac isa soo taraya oo salka ku haya halista Quutal Daruuriga bilaa hubinta dalka kusoo gala oo sababa xanuuno badan.
Bariiskan caagga ah ayaa markii u horeysay lagu arkay dalka Shiinaha oo la aaminsan yahay inuu yahay dalka lagu soo farsameeyo,waxaana markii dambe lagu arkay dalal ka tirsan qaaradda Afrika sida Nayjeeriya oo iyadu qabatay Bariiskan soona bandhigtay kadib markii baadhis lagu sameeyey.